Igbo - 01. Conversation - Booklet 6: Kedụ Ka Isi Ihe Onye Alakụba ga-akọwori ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu? | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 6 Unity of the Trinity
This page in: -- Arabic? -- Cabuano? -- Chinese -- English -- French -- German? -- Hausa -- IGBO -- Indonesian -- Russian -- Somali -- Telugu -- Yoruba
Previous booklet -- Next booklet
01. Mkparịta ụka ya na ndị Alakụba banyere Kraịst
6 - KEDỤ KA ISI IHE ONYE ALAKỤBA GA-AKỌWORI ỊDỊ N'OTU NKE ATỌ N'IME OTU?
Ihe nke abuo gbagwojuru onye Alakụba anya ịghọ onye Kraịst bụ nkwenye ha kwenyere na Ndị Kraịst kweere na chi atọ. Gini ka Koran na akuzi banyere nke a? Olee nghota nke Nna, Ọkpara, na Mmuo Nso abatala na Islam? Kedụ ka ị ga - esi nyere Muslim aka ị meghere Chineke Nna ya site n'aka Ọkpara Ya Jizọs Kraịst? A na-aza ajụjụ ndị a na ndabere nke agba ochie, agba ohu, ọgụgụ isi, Koran na akaebe nke aka gị.
6.01 -- Title
6.02 -- Ọjị nke Atọ n'Ime Otu bụ nke Islam
6.03 -- Jaa nke chi nke Jizos Kraist
6.04 -- Ajuju nke Chi nke Mmuo Nso
6.05 -- Kedu ihe na-efu na Islam?
6.06 -- Akaebe nke agba ochie na otu nke Atọ n’Ime Otu
6.07 -- Ama nke Agba Ọhụụ nye Akwụkwọ Nsọ nke Atọ n'Ime Otu
6.08 -- Nrutu aka site na mpụta nke nkpuru nke enwere ike n’otu n’ime ato n’otu n’ime
6.09 -- Ihe ịrịba ama nke ịdị n'otu nke Holy Trinity na kor'anan
6.10 -- Onye akaebe banyere ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu dị Nsọ na Agba nke Ndị Kraịst
6.11 -- Nnoycha
6.01 -- Kedụ Ka Isi Ihe Onye Alakụba ga-akọwori ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu?
Onye ọ bụla na-agwa onye Alakụba okwu n’oge na-adịghị anya ga-amata na ọ na-ahụ okwukwe anyị na Chineke Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ dị ka mmehie na-enweghị mgbaghara. Ndị Alakụba Alakụba na-ekwusi ike na Chineke enweghị ike ma ọ bụghị Allah! Onye obula nke nejiko Okpara ma obu Mmuo Nso n’ime Onye Okike, ewere dika onye iro nke Allah na ndi mo-ozi ya nile (Suras al-Baqara 2:97-98; al-Ma'ida 5:73).
Esemokwu dị ka nke ndị Alakụba megidere Atọ n'Ime Otu dị nsọ. A ga-achịkọta nke a dịka ozi ndabere maka mkparịta ụka ya na ndị Alakụba.
Muhammad gbara Ndị Kraịst ume, sị: "Asịla atọ! Nke ahụ ga-akara gị mma!" (Sura al-Nisa '4:171). “Onweghi nne nke Chukwu, odighi amu nwa nwoke site na Allah” (Sura al-Ma'ida 5:116). “Onweghi onye kwesiri inabata onye ozo dika onye nwe ya” (Sura Al ’Imran 3:64; al-Tawba 9:31). "Allah abụghị Kraist" (Surat al-Ma'ida 5:17,72; al-Tawba 9:31). "Maka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, ọ ga - abụrụ ihe ijuanya ibibi Kraịst na nne ya, ma ọ bụrụ na ha ga - ekwu na ọ bụ chi" (Sura al-Ma'ida 5:17).
A jụrụ nkwuputa na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara nke Chineke ugboro 17 na kor'an (Sura al-Tawba 9:30 a.o.). A na - akpọ Isa naanị nwa Meri mana ọ bụghị Ọkpara Chineke. A na-ahụta ya dị ka anụ ahụ dịka Adam (Sura Al 'Imran 3:59). Allah nyere iwu: Bụrụnụ! ya mere ọ buru (Surat al-Baqara 2:117; Al ’Imran 3:47,59; Maryam 19:35). Nke a ezighi ezi, dịka na kor'an Allah kwuru hoo haa: "Anyị furu mmụọ anyị n'ime ya (Meri)"; ya mere aburuwo Jisos n’ime ya (Surat al-Anbiya '21:91; al-Tahrim 66:12). Onye Alakụba nwere ike ikwenye na ọmụmụ Kraịst site na nwanyị na-amaghị nwoke Meri, mana ọ na-ekwu na o megidere nkwenkwe Ndị Kraịst: Ọ bụ onye amụghị amụ, amụghịkwa amụ site na Allah.
Kor'an gosiputara na Kraist bu oru nke Allah (Suras Al ’Imran 3:172; Maryam 19:30), onye nnochite anya ya (Suras al-Baqara 2:87; Al’ Imran 3:49,53; al-Nisa '4:157,171; al-Ma'ida 5:75; al-An'am 6:61) na onye amụma ya (Sura Maryam 19:30). O rubere ya isi nye Allah (Surat al-Ma'ida 5:52,117; al-Tawba 9:31), kpekuo Chineke (Allahumma; Sura al-Ma'ida 5:114) ma nakwere Allah dika onye nwe ya, onye nyere ya Ntụziaka (Surat Al 'Imran 3:51; al-Ma'ida 5:72,114,117; Maryam 19:36; al-Shura 42:13; al-Zukhruf 43:64).
N'ime amaokwu iri ise nke kor'an, Jizọs yipụrụ Chinekebụ chi ya. Dọ aka na ntị nke mmụọ nke Apostle John metụtara Islam (1 Jọn 2:18-25; 4:1-5).
Anyị kwesịrị ịghọta na kor'an ọ bụghị nanị na-emebi Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, kama ọ na-ekwuputa na mmụọ nsọ dị ka ihe e kere eke, ọ bụghị Chineke. Allah n’ekwu okwu otutu oge nke “ayi” Mo (Suras Maryam 19:17; al-Anbiya ’21:91; al-Tahrim 66:12), ma obu“ mo ”(Suras Sad 38:72; al-’Ankabut 29:15), mana n ’ọnọdụ niile, a na-ahụta mmụọ a ka ekepụtara na ọbụghị mmụọ. Na Islam, ọ dịghị mmụọ nsọ nwere onwe nke iche maka Allah nwere ike ịbụ otu ma ọ bụghị abụọ ma ọ bụ atọ.
Omenala Alakụba na-akọwa na Jibril (mmụọ ozi Gebriel) bụ mmụọ si na Allah (Surat al-Baqara 2:97-98; al-Tahrim 66:4) onye zipụrụ mkpughe nke Onye-nwe ya na Zakịọs, Meri, Isa na Muhammad . Egosiputara ya dika “Mo Nso nke meworo ka Jisos guzosie ike n’ iru ebube ya (Onu ndi ozo, al-Baqara 2:87,253; al-Ma'ida 5:110; al-Nahl 16:102). N’ala Islam, mmụọ a ka bụ ohu nke Chineke, n’okpuru iwu ya (Surat al-Qadr 97:4; al-Israel ’17:85; al-Shura 42:52), onye n’eme ntukwasi obi ya (Sura al-Shu’ara) 26:193). Ndị Alakụba na-asọpụrụ ya nke ukwuu, n'agbanyeghị na ha amaghị onye ọ bụ n'ezie.
Site na ntinye okwu a dị mkpirikpi, ndị nwere ike iche n'echiche mmụọ, ga-aghọta ụfọdụ isi okwu maka mkparịta ụka anyị na ndị Alakụba: Na Islam, enweghị Nna, enweghị nwa, enweghị mmụọ nsọ (Sura al-Ikhlas 112:1-4).
Enweghị nchekwa ime mmụọ na nchekwa nke Nna-Chineke, enweghị mmekọrịta nke gị na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, mmesi obi ike nke mgbaghara nke mmehie niile, enweghị ike ịghọta Atọ n'Ime Otu (1 Ndị Kọrịnt 12:3; Ndị Rom 8:8-10, 15-16 site), mkpụrụ nke mmụọ nsọ (Ndị Galeshia 5:16-26) na enweghị olileanya doro anya nke ndụ ebighi-ebi (Jọn 11:25-26). N'ebe anabataghi Mo Nso, odigh ihe puru iche.
E wezụga mbọ anyị na-enye na imeghe ndị Alakụba Oziọma, ịrịọ arịrịọ na-aga n’ihu dị mkpa ka Jizọs Kraịst wee kwadebe ndị mmadụ site na Mụọ ya ma nye ha amara ịnụ Okwu ya, ịghọta ya na ime ya. Onweghi onye ga - akọwara onye Alakụba ihe nzuzo nke Atọ n’Ime Otu ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ emeghị ya agụụ maka ezi Chineke na ịdị njikere ịnụ Okwu ya ma nweta ìhè nke mmụọ nke na-abanye n’ọchịchịrị nke obi mmadụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkọwara ndị Alakụba Ozi Ọma, anyị ekwesịghị iwe iwe site na mkpesa ha na mmụọ nke Kraịst nke ga-agba anyị mmiri. Ihunanya nke Kraist siri ike karie n'abia nke ndi Islam. Na-achọ arụmụka bara uru iji kọwaara ndị Alakụba nke Akwụkwọ Nsọ nke Atọ n'Ime Otu, a ga - achọta ebe ise maka mkparịta ụka:
Na Torah na ndi amuma anyi nwere ike ichota otutu okwu si na Chineke I. Akaebe nke mpako nke onye nke HolyNa Tora na ndi amuma anyi nwere onu di egwu. Akaebe nke otu egwu dị mkpa nye onye Alakụba nwere ịhụnanya maka onye ọ ga-egosi na Mgbe ọ bụla ọ na-egosi na anyị ga-ahụ ihe ndị ọzọ na - eche, sị: Akaebe nke agba ochie dị mkpa nye onye Alakụba nwere mmasị n'ihi na ọ na-egosi na Atọ n’Ime Otu abụghị echiche nke Ndị Kraịst kama ọ na-akọwa ịdị adị nke Chineke kemgbe ebighi ebi.
Amaokwu nke mbụ n'ime Akwụkwọ Nsọ agbaala ama maka Nsọ:
Jenesis 1:1-3: Na mbu Chineke kere elu-igwe na ụwa. Waswa enweghị ụdị ya, ọ tọgbọ chakoo, ọchịchịrị dịkwa n’elu mmiri ahụ, ma mmụọ nke Chineke na-eje n’elu mmiri. Chineke wee sị, Ka ìhè dị, “Ìhè wee dị’ ma ìhè dị.’.
N'okwu mmeghe nke a anyị na-agụ banyere Chineke, mmụọ ya na Okwu ya. Onye mgbasa ozi-ọma Jọn kwupụtara na Chineke kere ụwa site n'aka Jizọs, okwu ya n’arụ (Jọn 1:1-4).
Amaokwu nke mbụ nke Akwụkwọ Nsọ ga - eduzi anyị ịrịọ Chineke na mmụọ Ya ga-efekwasị ndị Alakụba, ezinụlọ, obodo, obodo na mba niile, na uche ha na obi ha ga-adị njikere ruo mgbe Onyenwe anyị kwuru, sị: “iwe wee dị!" ma ìhè di!
Na Jenesis 1:26 Chineke kwuru: Ka anyị mee mmadụ n'onyinyo anyị, dịka oyiyi anyị si di!
Chineke (Elohim) oge ụfọdụ na ekwu ya na otutu (anyị), nke gụnyere ekwe omume nke Atọ n’Ime Otu. Ndị Juu na ndị Alakụba na-akpọ ụdị a pluralis majestatis. Na mkparịta ụka ya na ndị otu ndị otu Kraịst si Wadi Nadjran (Northern Yemen), amaokwu a metụrụ Muhammad n'ahụ nke ukwuu nke na o mechara hapụ Allah ka ọ kwuo okwu na otu ihe na kor'an.
Elohim, okwu Hibru maka Chineke dị ọtụtụ. "El" putara ike, ike na ume (Matiu 26:64), "ya" putara "ha", ka ewee gua Elohim dika “onye di ike bu otutu”. Enwere ike ịghọta okwu ahụ Allah na Islam n'ụzọ kwekọrọ, ka e wee nwee ike gụọ "al-el-hu" dịka "ike ya" (otu onye nanị)! Aghọtara Chineke nke Akwụkwọ Nsọ dịka otu ịdị n'otu na otutu. Muhammad anabatala okwu ahụ Elohim n'asụsụ Arabic ma jiri ya mee ihe dị ka Allahumma ugboro ise na amaokwu dị mkpa na kor'an (Suras Al 'Imran 3:26; al-Ma'ida 5:114; al-Anfal 8:32; Yunis 10:10; al-Zumar 39:46). Maka ya aha Chineke na agba ochie dika odi nkenke nke ekpere n’ekpechazu, aghaghi aza ma mezuo.
Na Jenesis 18:1-3 anyị na-agụ na ụmụ nwoke atọ bịara ileta Abraham. Mana ọ kpọrọ ha: “Onyenwe m”, nke bụ otu.
N’Ọnụ Ọgụgụ 6:24-27, anyị na-ahụ Ngọzi Erọn, nke ekwuru banyere “Onyenwe anyị” ugboro atọ. Churchesfọdụ ụka na-egosipụta nke a site na ngọzi nke Nna, ngọzi nke Ọkpara na ngọzi nke Mmụọ Nsọ, dịka ngọzi nke Onye “otu”.
N’Abụ Ọma 2:1-4, anyị na-agụ banyere nnupụisi nke ihe a kpọrọ mmadụ megide Onye nwe ya na Onye E Tere Mmanụ (Mesaịa). Ma Onye Pụrụ Ime Ihe Niile chịrị ha ọchị ma kwuo naanị otu okwu: "Nna bụ Ọkpara m; taa, amụọla m gị!" (Abụ Ọma 2:7). Mkpughe nke a mere otu puku afọ tupu Jizọs Kraịst. Ọ na-arụtụ aka na mmụọ nke Ọkpara site na Nna site na mgbe niile, nke a na-ekwesịghị ịghọtahie dịka ọmụmụ sitere na Meri. Jesus ama odu mbemiso enye ekedide owo. Ọ bụ Chineke nke mgbe ebighi ebi site na Chineke mgbe nile! (Jọn 1:14; Ndị Filipaị 2:6-7).
Aisaia 9:6 bu ezigbo ihe nlele nke ịdị n’otu n’ime Atọ n’Ime Otu: N’ihi na amụrụ anyị otu nwa, enyewo anyị nwa nwoke; Ọchịchị ga-adịkwa n’ubu ya. A ga-akpọkwa aha ya Onye Ndụmọdụ, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, Nna Nke mgbe ebighị ebi, Onyeisi Udo.
Amaokwu a kọwara na Ọkpara ahụ ekwere na nkwa abụghị naanị Onye Ndụmọdụ Dị ebube na Chineke Nke dị ike, mana n’ime Nna Nke mgbe ebighi-ebi n’onwe ya ghọrọ mmadụ. Olee ebe nwatakiri amuru ozo n’otu oge Nna ya? Mkpughe nke a pụrụ iche bịara afọ 700 tupu Jizọs Kraịst adị ndụ n'ụwa. Ihe odide a bụ ezigbo akaebe banyere eziokwu ebighi-ebi nke chi atọ n'ime otu.
Abụ Ọma 110:1 na-anyụ egwu dị ka uda drum site na mgbe na mgbe ebighi ebi. N’ebe a ka edere ya si: Onye nwem kwuru si onyenwem: Nọdu ala n’aka nri m, rue mgbe m’mere ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ gị.
The earlyka na mbu ghotara amaokwu a dịka nkwa nke kọwara Ascension Jizọs na ocheeze ya n’eluigwe (Matiu 26:64; Ọlụ Ndịozi 2:25,34; 1 Ndị Kọrịnt 15:25; Ndị Filipaị 2:8-9; Ndị Hibru 10:12) -13). Ọkpara ahụ soro Nna ya nọdụ ala n’ocheeze ya (Nkpughe 3:21). Ha abụọ na-achị eluigwe na ụwa n'ịdị n'otu zuru oke. Kemgbe Ọkpara ahụ emechaa gbapụta ụmụ mmadụ, Nna ga-etinye ndị iro ya niile “ihe mgbakwasị ụkwụ ya!” Nkwa a gụnyere ike nke ndi Kristian niile ma na - akpọpụta okwukwe anyị na mmeri nke Chineke anyị!
Ndị na-agwa ndị Alakụba okwu kwesịrị ikwusi ike na nkwa ndị dị na agba ochie ịkọwa ịdị n'otu nke Kraịst na Nna ya, n'ihi na mmejuputa ha na agba ohu pụtara dịka ihe a na-apụghị iguzogide akọwa maka onye Alakụba kwesịrị ntụkwasị obi. Ihe ọ bụla Allah nyere n’iwu ga-eme otu mgbe. Ọ bụrụ na o kwere nkwa ihe, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-emezu. Onweghi onye nwere ike ịkwụsị mmezu nke mkpughe ya. Nye ụfọdụ ndị Alakụba nkwa 333 nke agba ochie nke mezuru na Agba Ọhụụ nwere ike bụrụ ihe ngosi siri ike maka ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu. Ya mere, nkwa ndia na nmezu ha kwesiri igu akwukwo ma buru kwa ihe ha guta.
Ozizi anọ ndị a, akwụkwọ ozi nke ndị ozi na Mkpughe nwere njikọ chiri anya na njikọ nke ịdị n'otu nke Nna, Ọkpara, na Mụọ Nsọ. Oburu na anyi ahuta ufodu ndi Alakụba ndi di njikere igbanu Agba Ọhụụ, anyị kwesiri imesi ha ike maka ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu. Ndi Alakụba na ndi Juu ghọtara na Chukwu bụ “Onye naanị Ya”. Christiansfọdụ Ndị Kraịst tinyekwuru ike na Chi atọ. Ha kwesịrị ichegharị ma chigharịkwuru ụmụ Abraham iji mụta ịkọwa ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu dị n’usoro ha si eche echiche.
Matiu 1:23b: Le, nwa-ab virginọghọ ahu di ime, we mua nwa nwoke, ha gakpọ aha-ya Immanuel- nke asughariri: “Chineke nonyere anyi”.
Immanuel bụ otu n'ime aha Jesus 250 na Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ ezi Chineke na nwoke n’otu oge. Nime Ya ka Chineke nonyere anyi. Nkwa a nke dị na Aisaia 7:14 na mmezu ya nwere ike inye anyị nkasi obi dị ukwuu.
Mgbe emesiri ya baptism, Jizọs siri na mmiri ahụ bilie ozugbo; ma lee, elu-igwe meghere nye Ya, Ọ hụkwara mmụọ nke Chineke ka ọ na-efedata dika nduru na -adikwa n’elu Ya. N’otu ntabi anya, olu sitere n’elu igwe kwuo, si, Onye a bu Ọkparam M huru n’anya, Onye ihe Ya diri Gi nma ”(Matiu 3:16-17).
Maka onye Alakụba, akụkọ banyere baptism nke Kraist (Matiu 3:16-17; Mak 1:9-11; Luk 3:21-22; Jọn 1:31-34; 5:37-38) nwere eziokwu na-atọ ụtọ: otu olu si n’eluigwe nụ! Ndị Alakụba ghọtara nke a bụ mkpughe mkpirisi. Onweghi onye puru igbochi ikwu Onye Puru Ime Ihe Niile. Onye ga - enwe ike igbochi ya ịsị: "Onye a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n'anya; ihe ya dị m mma nke ukwuu"? Mọ Nsọ dakwasiri ya dika ihe eji eje ozi ya n’agbanyeghi na amuru ya site na Mo Nso. Emewo Jisos baptism na Jọdan site na njupu nke Jọn Baptist. Jizọs enweghị mmehie, ọ dịghịkwa mkpa ka e mee ya baptizim. Mana o jiri nwayọ were mmehie anyị niile na mmalite nke ozi ya.
Ọ bụ ya mere Baptist jiri tie mkpu: "Lee Nwa-atụrụ nke Chineke, Onye na-ewepụ mmehie nke ụwa!" (Jọn 1:29)
Ọ bụ ya mere mmụọ nsọ ji dakwasị ya dịka nduru wee dịrịkwasị ya.
Ọ bụ ya mere Nna ji gbaa akaebe: "Nke a bụ Ọkpara m hụrụ n'anya, Onye ihe Ya dị m ezi mma!"
Baptizim nke Kraist bu ihe ederede di na uka nke oma banyere nghota nke idi n’otu. Nna ahụ, Ọkpara ahụ na Mmụọ Nsọ rụkọrọ ọrụ maka nzọpụta nke ndị mmadụ site na mmalite nke ozi Jizọs.
Mattiu 12:18 na-ekwu maka oru nke Onye-nwe-ayọ nke ọ họọrọ, onye Ọ hụrụ n'anya na onye ihe ya masịrị ya. Ọ ga-etinye mmụọ ya n'ahụ ya ka o wee kwuwapụta ikpe nke mba nile. Mmezu a nke Aisaia 11:1-5 na-egosi, na Onyenwe anyị, Ohu Ya na mmụọ Ya bụ otu na ịdị n'otu zuru oke na onye nke Jizọs. Ndụ ya niile abụghị naanị ndụ mmadụ, kama ọ nọgidere bụrụ otu n'ime Atọ n'Ime Otu.
Luk 4:18-19a: Mọ nke Jehova dịkwasịrị m, nihi na Ya etewo m mmanụ izisa ndị ogbenye ozi ọma. O ziterem ka m gwọta ndi obi ha tiwara etiwa, ikwuwa nnwere onwe nye ndi a dọtara n’agha na iweghachịkwa ụzọ nye ndị ìsì, na ịtọhapụ ndị a na-emegbu emegbu, ikwusa afọ a na-anakwere nke Jehova.
Na Luk 4:18, Jizọs Kraịst na-ewebata onwe ya na Nazaret site na ịsị: “Mmụọ nke Onye-nwe dịkwasịrị m!….’’ Kraist kowara nke a ma kwuo: “nihi na O tewo m mmanụ.” Okwu ahụ Kraist pụtara: Mesaịa ahụ, onye e tere mmanụ.
N'ihi gịnị ka e ji tee Jizọs mmanụ? "Ikwusara ndị ogbenye ozi ọma na ịgwọ ndị obi ha tiwara etiwa!" Onye obula natara ite agba ohu (2 Ndị Kọrịnt 1:21; 1 Jọn 2:20,27) nwere ike ikwugharị ọgbụgba ama nke Jizọs, maka Onye Kraịst bụ naanị Onye Kraịst ma ọ bụrụ na mmụọ nke Onye-nwe dị n’arụ ya ma chụpụ ya. ya imezu oku Ya (Aisaia 61:1-2; Ndi Rom 8:10-16).
E nyewo m ikike nile n’eluigwe na n’elu ụwa. Ya mere gaanụ mee ndị mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere gị n'iwu; le, m nọnyeere unu oge niile, rue ọgwụgwụ ụwa (Matiu 28:18-20).
N'ime nnukwu ọrụ anyị gụrụ na onye ọ bụla kpebiri iso Kraịst ga-eme ya n'aha nke Nna, nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ. Gini mere iwu a ekwughi "n'aha"? N'ihi na ha atọ bụ Otu! Ezi aha Chineke anyị bụ "Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ."
Jọn 10:30: N’ozi ọma nke Jọn anyị gụrụ ama dị egwu nke onye ọzụzụ atụrụ ọma: Mụ na Nna m bụ “abụọ”?! N'ezie ọ bụghị, mana "otu"! Gini mere anyi ji agbasa ozi oma banyere abuo, oburu na Jisos kwuru naani? Nghọta a dị elu na-achọ nchegharị nke ndị mgbasa ozi ọma niile nye ndị Alakụba na ndị Juu. Nna ahụ na Ọkpara ahụ abụghị otu! Anyị kwesịrị ịgbanwe obi anyị ma mụta iche echiche abụghị naanị n'ụdị ọrụ nka na nka na ụzụ kamakwa n'ihe metụtara eziokwu mmụọ, ma dozie onwe anyị na ndị na-achọ ya na ndị kwere ekwe na Ọwụwa Anyanwụ.
N’ebe ịgba ama nke Jizọs banyere onwe ya (Jọn 14:9-11) anyị gụrụ: “Onye hụrụ m ahụwo Nna m!” Site na nkwupụta a, Jizọs gbara akaebe na ịdị n'otu ya na Nna ya n'ụdị na n'ọdịdị, dị ka mmezu nke Jenesis 1:27. Emesia Jisos kwuru na okwu nile nke okwuru ya abughi nke aka ya, kama Nna ahu, Onye bi n’ime Ya, obughi na obu ya site na ya kama neme ihe okwuru. Jizọs na -anọdụ n’ime Nna na Nna n’ime ya. Nke a gosiputara ịdị n'otu ha zuru oke na mmụọ.
Na Jọn 14:23, Jizọs kwuru, sị: "Ọ bụrụ na onye ọbụla hụrụ m n'anya, ọ ga-erubere okwum isi, Nna m ga-ahụkwa ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya mee anyị ụlọ n'ime Ya."
Jizọs kpughere ebe nke Mmụọ Nsọ na ụmụazụ ya. N’ime ihe odide a, mmuo egosiputaghi obughi na nkwekorita di nkpa na Nna ya na Ọkpara ya, kama O na-anochite anya ha dika mmuo ha.
N’ime nkwa atọ ndia banyere Onye ndụmọdụ na-abịa (Jọn 14:26; 15:26; 16:13-15) anyị gụrụ njirimara 10 nke ịdị n’otu na njikọta nke Nna na Ọkpara n’ Mmụọ Nsọ. Mụọ Nsọ anaghị enye onwe ya otuto ma ọ bụ nke na-enye ya onyinye ebube mana ọ na-enye Jizọs otuto. Jizọs anaghịkwa etu ọnụ banyere onwe ya mana o na-asọpụrụ Nna ya mgbe niile. Chineke anyị bụ Chineke dị umeala ma dịkwa nwayọ (Mat. 11:28-30)! Onweghi ihe ojoo di n’ime mo Nso di n’ime mo-ojo. Onweghi onye otu na-eme onwe ya otuto ma ya na-enye onye nke ozo otuto oge niile. N’ihi nke a Chineke nyefere Ọkpara ya ike niile n’eluigwe na n’elu ụwa; Jizọs nyekwara ikike nke mmụọ nsọ iwu Nzukọ Ya. Humilityd humility ala nke loveh divinen'anya nke Chineke b oner unity ihe b ther unity ihe nzuzo nke unity d of n’otu nke Holy Holy. Anyị ga-amatali Chukwu anyị mgbe anyị nyere ya ka ọ gbanwee omume anyị ma mee ka anyị dị umeala n’obi dịka ọ dị. Nka nemegide npako nke Allah na ndi n’eso uzo ya (Sura al-Hashr 59:23).
Jọn 17:21-23: N’ekpere ya nke onye isi nchụ-aja, Jizọs rịọrọ Nna ya maka ụmụazụ ya, sị: "Ha nwere ike ịbụ otu dịka anyị bụ otu: Mụ onwe m na Gị n'ime Gị. Ka ha wee zue oke n'otu…"
N’ime mkparịta ụka a n’ime Holy Trinity Jizọs kwuru ihe nzuzo ya: Anyị bụ otu! Eziokwu ime mmụọ a bụ ihe mere ekewapụ anyị na ndị Juu na ndị Alakụba. Njikọ nke mmụọ Nna na nke Ọkpara na Mmụọ Nsọ bụ ntọala nke okwukwe anyị. Unitydị n'otu a apụtaghị dịka echiche ezi uche dị na ya nke dị ka ihe n'ihu anyị, mana enwere ike iji ya tụnyere nnukwu ndọta nke na-anwa ịdọta anyị n'ime onwe ya. Lovehụ Chineke n'anya bụ ike na-adọrọ adọrọ.
Jizọs rịọrọ Nna ya ka o mee anyị otu, dịka ya na Nna ya bụ otu, ya onwe anyị n’ime anyị, Nna ahụ dịkwa n’ime ya. Atọ n’Ime Otu abụghị nkịta a na-apụghị ịgbagha agbagha kama ọ bụ eziokwu ime mmụọ nke ga-ejikọta anyị na ịdị adị nke Chineke site n’amara. Akpọrọ anyị "ahụ nke Kraist" (Ndị Rom 12:4-5; 1 Ndị Kọrịnt 12:27; Ndị Efesọs 4:4,25) na "ụlọ nsọ" nke Mmụọ Nsọ (1 Ndị Kọrịnt 3:16) ma nwee mmụọ Ikike ịbanye na ịnwe n’ime Atọ n’Ime Otu, na Kraịst (2 Ndị Kọrịnt 5:17; Jọn 15:4) na n’ime Chineke n’onwe ya (1 Jọn 4:16).
Agba Ọhụụ juputara na ngosipụta nke Atọ n’Ime Otu. Ndị nwere ike chọọ, ịgụ na ịkọwa nwere ike ichebara amaokwu ndị a: Jọn 17:1-3; 20,21-23; Ọrụ 1:4-5; 2:32-36; 1 Ndị Kọrịnt 2:10; 2 Ndị Kọrịnt 5:19; Ndị Galeshia 4:4-6; Ndị Kọlọsi 2:9-10; Ndị Hibru 9:14; Nkpughe 7:10; 21:22-23; 22:3-4 na ndi ọzọ. Anyị kwesịrị ịgụ ebe ndị a na-ekwu maka ịdị n'otu nke Nna, Ọkpara, na Atọ n'Ime Otu, ọ bụghị naanị n'echeghị echiche kamakwa na-ekpe ekpere, na-ekele ma na-efe ofufe. Naanị Mụọ Nsọ nwere ike ịme ka anyị mata ihe nzuzo nke Atọ n’Ime Otu. Mgbe ahụ anyị agakwaghị ewere ya dị ka ihe na-agwụ ike, kama anyị ga-ekwupụta ya dịka ihe dị ebube si na ahụmihe.
Ntughari uche nke Mo-Nsọ di ike karie nghota nke mmadu. Ihe nzuzo nzuzo a ka apuru ighota nke mọ. Otutu ndi Alakụba anọghị n'ọnọdụ kwesịrị iche n'echiche mmụọ maka na Islam ezi mmụọ adịghị. Jizọs tụrụ ilu banyere ndị na-anabataghị Ozi Ọma ya. Yabụ onye ọ bụla chọrọ ịkọwara ndị Alakụba na-anaghị erube isi na Akwụkwọ Nsọ banyere ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu, nwere ike iji ọtụtụ ihe atụ na ihe atụ bara uru na ndụ kwa ụbọchị. Studentsmụ akwụkwọ sekọndrị na ụmụ akwụkwọ mahadum nwere mmasị ige ha ntị.
Anyanwụ bụ bọlbụ nke nwere dayameta kilomita 1.5. Obere n'ime ụzarị ya ruru ụwa n'agbanyeghị ịdị anya nde kilomita 150 ma na-enye ọkụ, okpomọkụ na ndụ. Ọhụụ atọ, anyanwụ, ụzarị ya na ikpo ọkụ ya bụ ịdị n'otu na-enweghị atụ.
Ọkụ Eletrik nwere igwe na - eweta ọkụ eletrik nke na --emepụta ọkụ, okpomọkụ na mmegharị. Ha atọ, jenerato, nke dị ugbu a na ihe a na-eme bụ otu!
Mmiri nwere ike ịpụta dị ka mmiri mmiri, ice ma ọ bụ uzuoku. N'ọnọdụ ọ bụla ọ pụtara, ọ na-abụ otu ihe ahụ.
Ime ụlọ nwere ogologo, obosara na ịdị elu. Ọ bụrụ na otu n'ime atọ ahụ efu, mgbe ahụ ụlọ ahụ abụghịzi ime ụlọ mana naanị ụgbọelu.
Mmadu mejuputara aru, mmuo na nkpuru obi. Ọ bụrụ na otu n'ime mmadụ atọ ahụ na-arịa ọrịa, ndị ọzọ na-ata ahụhụ. Ọ bụrụ na otu n'ime atọ ahụ efu ndị nke ọzọ agaghị anọ n'ụdị ọ bụla.
Ezinaụlọ nwere nna, nne na ụmụ. Atọ ndị a bụ otu ịdị n'otu. Divorcegba alụkwaghịm ga-abụ ihe na-ekwekọghị n'okike na-egbu mgbu.
Anya nwere ọtụtụ akụkụ: Anyị na-amata ọcha nke anya, iris nwere agba na nwa akwụkwọ ojii. Ihe nile n’otu buru uzo. Ọ bụrụ na akụkụ otu akụkụ ga-efu, anyị ga-kpuo ìsì.
Akwa ahụ bụ ọrụ ebube ya na shei ya, ọcha ya na nkochi ya. N'ime ya ka ọ ga-esi mepụta ndụ - ma ọ bụ akwa amịkpọkpọ!
Enwere ike ịgbasa ihe na-acha ọcha nke ìhè site na agba atọ ka ọ nwee agba atọ, n'ihi na ọcha bụ nchikota nke ọtụtụ agba.
Triangul nwere akuku ato ya na akuku ato, ma obu otu uzo geometrical mgbe obula.
Ihe mgbakọ na mwepụ na-akwado ịdị n’otu nke Atọ n’Ime Otu. Chịkọta otu na mgbakwunye otu na-eme atọ, mana ịmụba otu oge otu oge na-eme ka ọ bụrụ naanị. N’ihe banyere Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ, ha agaghị adịgide dịka onye ọ bụla dịka onye ọzọ; mana dịrị na ịdị n'otu zuru oke, ebe mmadụ niile na-anọrọ na nke ọzọ. Na eziokwu a, ha na-egosi dị ka akụkụ a na-anaghị ahụ anya.
Mgwakota agwa maka achịcha achịcha nwere ike ịkọwa ihe nzuzo a. Ahịhịa, mmiri na nnu dị n'akụkụ akụkụ akatabeghị achịcha. Ma agwakọta ihe ndia ato, igha isi na ikpo oku neme ya nri. Yabụ na Holy Trinity ọ dịghị onye dị adị ma ọ bụ nọọrọ onwe ya, mana onye ọ bụla bi na nke ọzọ, ha niile bụ otu.
N'Africa, onye na-ezisa ozi ọma gara n'otu ime obodo nwere ụlọ ahịhịa. Otu nwanyị na-esiri ezinụlọ ya nri dị na ite n'ite ọkụ. Ọkwọrọikọ kwuru na ọ ga-ewepụrịrị otu n’ime nkume atọ ahụ ite ahụ dikwasị ya. Nwanyị ahụ tiri mkpu, "Ee e, ọ bụrụ na m wepụ otu nkume, ite ahụ ga-ada, nri ahụ ga-ere n'ọkụ!" Onye nkwusa ozioma zara, "Lee," cannot gaghị esi nri na-enweghị Atọ n’Ime Otu. Ọ kọwaara ya ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu n'okwu dị mfe n'ọnọdụ ya.
Amụma ndị a niile si ebi ndụ kwa ụbọchị abughi ihe akaebe banyere ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu! Apụghị igosipụta okwukwe. Ọ bụrụ na anyị nwere ike gosipụta okwukwe, ọ gakwaghị abụ okwukwe. Ihe atụ bụ naanị enyemaka na ihe ịrịba ama na-ekpughe onwe ha maka ndị chọrọ ịghọta eziokwu nke mmụọ, ma na-eduzi ha na nzuzo nke okwukwe.
Ihe atụ ndị ae kwuru n'elu nwere njikọ na otu ihe dị elu nwere njikọ site na otu kacha elu. Asụsụ ma ọ bụ ọdịnala na-emebebeghị nke ọma enweghị ike iche echiche olumba. Mụọ Nsọ na-akuziri anyị ụzọ ọhụụ nke ga - adị ka nke a na - eme ka ọ bụrụ mmadụ na - eme ka ọ bie ndụ na - enweghị isi. Dịka ọmụmaatụ, anyị kwenyere na Jizọs na-anọdụ na Nna ya n'ocheeze n'otu oge ahụ ọ na-ebikwa n'ime obi anyị. Nke a enweghị ike iche nye ọtụtụ ndị Alakụba: Ma ọ nọdụrụ n’elu igwe ma ọ bụ dabere n’obi anyị ma ọ bụghị ha abụọ n’otu oge!
Anyi n’ekwuputa na ayi bu ndi agu n’onye ezi omume site n’amara. Onye Alakụba nwere ike ịza
Mụọ Nsọ na-akuziri ndị na-eso ụzọ Jizọs arụmụka mmụọ nke onye Alakụba na-enweghị ike ịghọta ngwa ngwa. Echiche nke ụwa ha dị iche n'echiche nke mmụọ. Ya mere anyi aghaghi inwe ndidi na nkparita uka anyi na ha. E kwuwerị, eziokwu ime mmụọ yiri ihe dị ịtụnanya ma bụrụ ihe na-adịghị adị nye anyị ogologo oge. Arịrịọ maka nghọta na mmụọ nke ndị Alakụba ka dị mkpa dị ka mkparịta ụka ahụ.
Anyị ekwesịghịkwa ichefu mkparịta ụka anyị na ndị Alakụba na okwu ahụ bụ "Atọ n'Ime Otu" adịghị na Bible! Yabụ, anyị ekwesịghị ịlụ ọgụ maka Atọ n'Ime Otu kama maka ịdị n'otu nke Chineke! Eziokwu nke Nna, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ pụtara ìhè n’akwụkwọ niile nke Akwụkwọ Nsọ, nihina Jizọs kwusiri ịdị n’otu ebighi-ebi ya na Nna ya n’ime Mmụọ Nsọ.
Okwu ahụ Atọ n’Ime Otu bu kwa mmeghe asusu na Bekee na Arabik. Onweghi okwu dị ka “Atọ n’Ime Otu” n’ime Akwụkwọ Nsọ! Kraist na ndi ozi ya kpughere Chi ato n’ime otu, ha ekwughi okwu banyere Chi ato di iche. Anyị kwesịrị ịtụgharị uche na ntọala nke okwukwe anyị wee laghachi n'eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ.
6.09 -- Ihe ịrịba ama nke ịdị n'otu nke Holy Trinity na kor'an
Ọtụtụ ndị Alakụba adịghị njikere ige amaokwu nke Akwụkwọ Nsọ n'ihi na ha chere na ọ bụ arụrụala. Azịza sitere n'echiche na sayensị bụ aka nye ụmụ akwụkwọ nwere nnukwu ụlọ akwụkwọ mahadum. Ọtụtụ ndị Alakụba ga-anabata naanị azịza site na kor'an na ọdịnala Alakụba. Anyị kwesịrị ịchọ ahịrịokwu ndị zoro ezo banyere Holy Trinity na kor'an n'onwe ya maka ndị nkatọ a.
Enwere ike iji amaokwu ndị dị na Koran na mbido mkparịta ụka n'ihi na ihe dị ka pacenti iri isii nke Qur’an nwere okwu na echiche sitere na agba ochie, bụ nke enyerela m Muhammad na nsụgharị nke Mishnah na Talmud . A na - enweta ihe dị ka pesenti asatọ nke kor'an site na akụkọ ndị a na-ebute ọnụ na Oziọma ma ọ bụ akụkọ ifo site na ịrọ òtù Ndị Kraịst. Anyi nwere ikike ịnabata ma wepu akaebe nke ndi Ju na ndi Kraist nke emere n’ime amaokwu Arabic nke kor'an ebe obu na ha sitere n’Akwukwo Nso. Ha aghaghi ijuputa na ihe nke mo ha. Ọzọkwa ọtụtụ nkọwa Qur'an n'asụsụ Arabic nwere ọtụtụ nkọwa pụtara wee kwe ka a kọwaa nkọwa dịgasị iche Yabụ na enwere ike jupụta ihe mbụ dị na Akwụkwọ Nsọ na ederede ụfọdụ.
Na-ahọpụta Atọ n'Ime Otu, e nwere ìgwè amaokwu 5 na kor'an nke na-akwado eziokwu nke Chi atọ n'ime otu:
Amụrụ Kraịst na Meri
Sura al-Anbiya '21:91 na al-Tahrim 66:12 na-enye mkpughe nke Allah:
"Anyị kuuru ume n’ime ya (ụfọdụ) mmụọ anyị!"
Site na nka ka agaesi kee Kraist na Meri. Allah na-ekwu okwu n'ụdị nke enwere ike ịtụle ka ọ bụrụ akara aka ya. O kwuru, sị: "Anyị fụrụ (mmụọ anyị) n'ime mmụọ anyị n'ime ya!" Allah agbabeghị mmụọ ozi Gebriel ka ọ banye na Meri, ọ gbughị mmụọ mmụọ ya n'ime Meri, na nke ahụ, edere na Allah tiri mmụọ nke ya n'ime Meri. Otu n'ime amaokwu abụọ a kwuru na Allah kubiri ume na Meri. Nke ọzọ na-ekwu na ya kubiri ume ya n'akụkụ nke onwe ya!
Site na akaebe a na kor'an, ndi Alakụba na-ekwusi ike na ịmụ ụmụ sitere na Allah kpamkpam. Amaokwu ndị a na-akọwapụta ọmụmụ Kraịst site na mmụọ nke Allah. Ha ato: Allah, Mmuo ya na Kraist gosiputara na kor'an dika ndi n’enweghi isi.
Ndị na-akọwa Alakụba chọpụtara adịghị ike nke amaokwu ndị a ma nwaa ịgbanwe ihe ọ pụtara site na inye ha nkọwa ọhụrụ: "Ọ bụ naanị na Mụọ nke Chineke na Okwu ya ka emere Jizọs. Mana nke a abụghị ọdịnaya nke amaokwu ndị a. A tụgharịrị ntụgharị a n'ime ha iji wepu chi nke Kraịst na mgbọrọgwụ ya.
Allah ji mmụọ ya kwado Kraist
Na kor'an i nwere ike ichota amaokwu ato nke na-ekwu na Allah wusiri Kraist ike site na Mmuo nke Onye Nsọ, ka o wee nwee ike iru oru oma ya. Site n'amaokwu ndi a, Kraist emeghewo anya ndi kpuru ìsì, were okwu ya gwọ ndi ekpenta, ma mee ka ndi nwuru anwu si n’ili ha (Sura al-Maida 5:110). Kor'an na-akọ banyere ọrụ ebube iri nke Kraist, nke, dị ka Islam si kwuo, ọ nweghị ike ịrụ naanị ya naanị, kama na enyemaka nke mmụọ nsọ zigara ya n'aka Allah oge niile. Nke a pụtara na Allah, mmụọ ya na Kraịst jikọrọ aka na ịdị n'otu!
Ndị nkọwa Islam kwusiri ike: Kraịst enweghị ike ịrụ ọrụ ebube ọ bụla n'onwe ya, yabụ Allah zitere Jibril iji mee ka ọ dị ike maka omume ya. Ha aghotagh ịdị umeala n’obi Kraịst nke kwuru, sị: “Ọkpara ahụ agaghị emeli ihe ọ bụla n’onwe ya. Ma onye ọ bụla jụrụ onye Alakụba: "isnye nwere ike ime ka ndị nwụrụ anwụ dịghachi ndụ?" ga - enweta azịza: "Naanị Allah!" Ma ọ bụrụ na ọ jụziri, sị: "you kwenyere na Kraịst bụ Allah?" ọ ga-enweta agọnarị agọnahụ. Eziokwu ahụ na-adịgide na Allah, mmụọ ya na Kraịst na-etolite ịdị n'otu zuru oke na arụmọrụ, ọbụlagodi na kor'an.
Kraịst - ezi Ayatollah
Mgbasa ọmụmụ nke Kristi na kor'an na-enye ozi na-atọ ụtọ sitere n'aka Allah, onye na-ekwu banyere Kraịst:
Anyị ga-emere ya akara aka maka ụmụ mmadụ na ebere si “anyị” (Sura Maryam 19:21).
Okwu Arabic maka akara bụ ayatun, gụọ Allah na nsonaazụ “Ayatollah” nke pụtara “ọrụ ebube pụrụ iche nke Allah”. Christ bụ nanị nwa nwoke Ayatollah onye Allah n’onwe ya họpụtara ka ọ bụrụ akara nye mmadụ niile. N’ime ya ka e mezuru akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị pụtara ìhè nke Jenesis 1:27 na Jọn 14:9.
Allah gara n'ihu na-ekpughe na Kraịst bụ ebere si "anyị", na-ekwu okwu na otutu. Nkwupụta a duziri ndị nkuzi nke Koran na ntụgharị uche pụrụ iche. Ha chọpụtara na amaokwu ọ bụla, ewezuga otu, na-amalite site na nkebi ahịrị: "Na aha Allah, onye nwere ọmịiko, na-eme ebere!" Ndị a na - achọ Islam eziokwu bịara na nkwubi okwu: Onye nwere obi ebere (al-Rahman) bụ Chineke Nna, Onye obi ebere (al-Rahim) bụ Mmụọ Nsọ na ebere (al-Rahmat) n'onwe ya bụ Aịsa, nwa Meri . Ha atọ bu otu ihe ahu.
Muhammad kpughere nkọwa a site na ime ka Chineke kpughee ya: “Anyị zitere gị ma ọ bụghị dịka ebere maka ụwa” (Sura al-Anbiya '21:107).
Gịnị bụ ebere nke Allah na ndụ nke Muhammad? Ọ weta iwu ọhụrụ, hiwere iwu Sharia, dịka ntọala nke steeti okpukperechi ya. Iwu a nke Allah anaghị azoputa onye Alakụba ọ bụla, kama ọ ga-ekpe onye ọ bụla chọrọ iwere ezi omume site n'ọrụ ọma ya. Ma Jisos gosiputara ihe banyere obi ebere nke Allah na olu ebube ya: O gwọrọ ndi nile bịakwutere ya, kpọlite ndi nile ndi nwuru anwu ma webata Mo nke udo n'ime uwa. N’ebea ka oputara ihe onye wetara obi ebere n’uwa ma onye obi ebere!
Kraist okwu nke Allah na Mọ nke Ya
Ọtụtụ oge Muhammad jiri okwu nke onye mgbasa ozioma Jọn, na Jizọs bụ Okwu Chineke nke yiri ya (Suras Al 'Imran 3:39,45,64; al-Nisa' 4:171; Maryam 19:34). Site na ntuliaka a, o kwenyere na ike nke Kraist dịka ikike zuru oke nke Okwu Chineke. Dabere na kor'an, na Kraist, okike, ọgwụgwọ, mgbaghara, nkasi obi na ike nke okwu Chukwu dị ugbu a ma na - arụkwa ọrụ. Kraist ekwughi na obu Okwu nke Allah kama obu onye ahu n’onwe ya. Dabere na kor'an, Kraist nọ na enweghi mmehie, nihi na ọdịghị ọdịiche dị n’etiti okwu ya na ọrụ ya. Nime ya ka uche Chineke na mmuo ya putara anya, ya mere na dika mkpughe nke Allah si buru Chineke, Kraist bu okwu Chukwu buru kwa Chi.
Kor'an na-agba akaebe ọtụtụ oge na amụghị Kraịst n'anụmanụ kama ọ bụ mmụọ nke ime mmụọ nke Allah. Ndi Alakụba kwuputara na nwa nke Meri bụ mmụọ ije n'ụwa, onye pụtara dịka nwoke ma bụrụkwa onye nwụsịrị, ebe ọ nwụrụ, laghachikwuru Allah (Suras Al 'Imran 3:49,55; al-Nisa '4:158,171; al-Anbiya' 21:91; al-Tahrim 66:12). Site n'okwu ndị a Islam na-abịaru nso na nzuzo nke nghọta Ndị Kraịst banyere Atọ n'Ime Otu. Ndị ntụgharị okwu na-anwa ịgbanwe ihe odide a ma kpọọ Kraịst "Okwu ahụ dị" na mmụọ nke Allah. Mana nke a egobeghi na kor'an, a na-etinye ya na ya jọrọ njọ.
Okwu mkparịta ụka na Atọ n'Ime Otu
N'ime akwụkwọ nke ndị Alakụba, a chọtala ọtụtụ ihe iriba ama nke ịpụ iche nke Kraist. Allah buliri nwa Meri mgbe ọ nwụsịrị nye onwe ya otuto (Suras Al 'Imran 3:55 na al-Nisa' 4:158). Dị ka Islam, Kraịst bi na Allah taa.
Na mkparịta ụka (Sura al-Ma'ida 5:116-117) Allah jụrụ Kraịst, ka ọ kuziiri ụmụ nwoke ịnabata onwe ya na nne ya dịka chi abụọ na-abụghị Allah. Azịza nke Kraịst na kor'an maka ajụjụ a dị mkpa doro anya! Otu ụkọ Ndị Kraịst echewo n'echiche dị ka Atọ n'Ime Otu a na-eme ihere na Arebia, nke ụka niile jụrụ. Eleghị anya Muhammad anụla banyere otu a na nghọtahie ha hiere nke Atọ n'Ime Otu. Kemgbe ahụ ndị Alakụba na-eche na Ndị Kraịst kwenyere na Allah dinyere Meri ma mụọ nwa na ya. Ha n’ezie jụ ụdị nkwulu ahụ! Anyi n’egosiputa na Muhammad ziri ezi iju echiche a! Atọ n’Ime Otu dị adị! Site na nkwekọrịta a, ọtụtụ esemokwu nke ndị Alakụba megide Iso ekeresimesi zọ Kraịst adịkwaghị! Anyị kwesịrị ịkọwara ha na anyị kwenyere na Atọ n’Ime Otu na mmụọ na ịdị n’otu, ọ bụghị n’ihe banyere ihe ọmụmụ, Atọ n’Ime Otu nke mejupụtara Chineke, mmụọ ya na Okwu ya (Jọn 1:1-14).
N’oge mkparita uka nke a n’agha n’etiti Allah na Kraist, egosiputara - ma ewezuga otutu echiche ojoo nke ndi Kristian - otutu okwu di egwu, na mgbe emesoro Kraist, Allah gha agbasi ma lelee ndi neso uzo ya mgbe mgbe dika Kraist n’onwe ya bu onye nlebara anya na onye nlere ndi neso uzo ya. N’ebea Allah na Kraist buru otu aha na aha nke negosi ikpe nile nke Kraist na kor’an!
Obi abụọ adịghị ya na anyị enweghị ike iji kor'an nwee ozi ọma maka ndị Alakụba. N'akwụkwọ ndi Alakụba, nzọpụta adịghị kpamkpam! Anyị enweghị ike ikwenye na mmụọ nsọ nke kor'an. Mana anyị hụrụ iberibe akwụkwọ nke Onye Kraịst gbara n'akwụkwọ nke ndị Alakụba. Wepupu ha, kpochapu ha ma tinye ha dika okwute Mozis n’ebe di nma nke ozioma. Ndị Alakụba Alakụba anaghị anụkarị asụsụ ọzọ na-ekwu karịa okwu kor'an. Maka nke a anyị wetaara ha Ozi Ọma n'ụdị ọrụ ha. Ma anyi agagh aghota okwu nke kor'an ma oburu na anyi amaghi ya.
Ndịozi kwuputara n'ụzọ doro anya ịdị adị nke Atọ n'Ime Otu.
Pita kwuru, sị: “Ngọzi na-adịrị Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye, onye mụrụ anyị ọzọ n'ihi olileanya dị ndụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ… (1 Pita 1:3-10; 5:10)
Jon dere, Anyị ji nke a mara, na anyị na -anyi n’ime Ya, na Ya onwe anyị, n’ihi na O nyewo anyị mmụọ Ya, anyị ahụwokwa ma gbaa ama na Nna zitere Ọkpara ahụ dịka nzọpụta nke ụwa. Onye obula nke kwuputara na Jisos bu nwa Chineke, Chineke na-anogide n’ime ya, ya onwe ya na Chineke. (1 Jọn 4:13-16; 5:12,20)
Pul ewet ete: Abasi oyom kpukpru owo ẹnyan̄a ẹnyụn̄ ẹsịm ifiọk akpanikọ. N’ihi na enwere otu Chineke na otu Onye Ogbugbo n’etiti Chineke na mmadụ, madụ Kraịst Jizọs, onye nyefere onwe ya dịka ihe mgbapụta maka mmadụ niile. (1 Timoti 2:4-6; 1 Ndị Kọrịnt 3:17-18)
Àmà ndịozi na-agba ume. Ha na-agba akaebe eziokwu nke mmụọ nke ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu na ndụ anyị.
Okenye nke otu ụka dị na Lebanon letara nwa ya nwoke, injinia, na Qatar, na Gulf Persian. Mgbe o kpere ekpere tupu nri ya na onye ọ bụla nọ ebe ahụ, onye ọbịa Alakụba bịakwutere ya ma mesịa gwa ya, ọ nwere ike ịhụ na ọ bụ nwoke na-asọ nsọ; ya mere ọ ga - achọ ịgwa ya ka ọ bụrụ onye Alakụba ma nata njupụta nke ebere Allah.
Okenye a ji amamihe zaa, sị: " Aga m echebara echiche gị echiche. Ọ bụrụ n’enye m onyinye karịa nke m nataworo, aga m eche n’onyinye gị!”
Ijuju, onye Alakụba jụrụ, sị: "Gịnị ka ị nwere nke anyị enweghị?"
Okenye ahụ zara, sị: "Allah bụ nna m, ọ maara m, na-elekọta m ma hụ m n'anya. Kraịst bụ Nwa Atụrụ Chineke, onye wepụrụ mmehie m niile ma mee ka mụ na Chineke dịghachi mma. Agaghị m ama m ikpe ma agaghị m aga. n ’ala-mọ n’ihi na o meela ka m bụrụ onye ezi omume n’ihu Chineke. Mmụọ nke Chineke bi n’ime m ebe Kristi sachara obi m mmehie, apụrụ m ịgwa Nna m nke eluigwe okwu n’ekpere m wee nye ya ekele maka ndụ ebighi-ebi nke o nyere m. Agaghị anwu, kama a ga m adị ndụ ebighi ebi wee si na ndị nwụrụ anwụ bilie dịka Onyenwe m siri na ndị nwụrụ anwụ bilie” (Jọn 11:25-26).
Onye Alakụba gara echiche miri emi n'ihi na onye okenye ahụ jiri okwu dị mfe gbaara ya àmà eziokwu na ịdị n'otu nke Holy Trinity na ndụ ya.
N’uche nke a, anyị na-ekele ndị niile akpọrọ ije ozi nke Onye-nwe Jizọs n’etiti ndị Alakụba ma na-ekpe ekpere maka ha ka Onye-nwe-anyị duuru ha gaa n’iso mkparịta ụka nke mmụọ na ụmụazụ nke Muhammad n’obodo ha.
Amara nke Onye-nwe-ayi Jizos Kraist,
na ihunanya nke Chukwu,
na mmekorita nke Mọ Nsọ
nọnyere unu niile.
(2 Ndị Kọrịnt 13:13)
6.11 -- N N O Y C H A
Ọ bụrụ n’ịguola akwụkwọ nta a nke ọma, ị ga - enwe ike ịza ajụjụ ndị a. Onye ọ bụla zara 90% nke ajụjụ niile dị na akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a nke ọma, nwere ike ịnweta akwụkwọ site na etiti anyị
Ọmụmụ ihe dị elu
n'enyemaka iji duzie mkparịta ụka
Ndị Alakụba banyere Jizọs Kraịst
dika agbamume maka oru ya maka Kraist n’abia.
Gini bu uzo mbu mbu nke nkwuputa okwukwe ndi Islam (shahada) putara?
N'ụzọ dị a whataa ka Muhammad jụrụ Atọ n'Ime Otu?
Ugboro ole ka anyị nwere ike ịgụ na kor'an na Allah enweghị nwa? Gini ka ngọnarị a pụtara dịka 1 Jọn 2:18-25 siri dị?
Gini mere 'Isa nwa Meri na Islam abughi Okpara Chineke?
Kedụ ka kor'an siri kwuo na Kraist bụ ohu Allah doo onwe ya n'okpuru ya.
Gịnị kpatara enweghị mmụọ nsọ dị na Alakụba? Kedu ihe nke a pụtara maka mmụọ nke ndị Alakụba?
Gini mere na aghotaghi na Chukwu dika Nna na kor'an?
Gịnị na-efu dị ka echiche Islam banyere Chineke?
Gịnị ka amaokwu atọ mbụ nke Akwụkwọ Nsọ na-ekpughe banyere ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu? Kedu ihe amaokwu ndị a nwere ike ịpụta maka ọrụ anyị n'etiti ndị Alakụba?
Gini mere Chineke n’agba ochie ji ekwu na onwe ya dika “Ayi” (ya bu na otutu)? Gini bu ihe okwu Hibru a bu “Elohim”?
Kedụ ka enwere ike ịkọwa ngozi Erọn (Ọnụ Ọgụgụ 6:24-27 na ntinye aka nke Seraphim na Aisaia 6:3 dịka nkwupụta nye Chi atọ n'ime otu?
Gịnị ka Abụ Ọma 2:1-7 na-akụziri anyị n'ihi Atọ n'Ime Otu?
N'ihi gịnị ka Aisaia 9:6 ji bụrụ ebe okwu pụrụ iche maka ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu?
Olee otú onye dere akwụkwọ ozi ahụ degaara ndị Hibru (1:9) kọwara Abụ Ọma 45:6-7? Kedu ihe nke a ga-egosi maka mkparịta ụka anyị na ndị Alakụba?
Gini mere Abụ Ọma 110:1 ji bụrụ ihe ịma aka nye ndị Juu na ndị Alakụba?
Gini ka nkwa ndi di na agba ochie putara nye onye Alakụba ma obu onye Juu?
Gịnị ka okwu ahụ “Immanuel” pụtara dị ka aha Jizọs? Ebee ka e dere nkwa a n’ime ndị amụma?
Gini kpatara mkpughe nke Mo-Nsọ di nkpa ji me baptism Jisos na osimiri Jọdan? Gini ka okwu Chineke puru iche mgbe emesiri baptism Jisos putara nye onye Alakụba? Cannye ga-egbochili Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile ịmụ nwa ma ọ bụrụ na ọ chọrọ inwe nwa?
Olee otú Jizọs si kọwaa utu aha ya bụ “Kraịst” n’ụlọ nzukọ dị na Nazaret? Kedu ihe mkpughe nke a pụtara maka nghọta nke ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu?
N’ebe n’ime nnukwu ọrụ nke Jizọs ka ị pụrụ ịchọta ihe ngosi banyere ịdị n’otu nke Atọ n’Ime Otu?
Gịnị mere Jizọs asịghị: “Mụ na Nna M bụ abụọ”? Kedu ihe kpatara anyi ji ekwu maka ndi Chukwu abuo a na ndi Alakụba?
Gini ka anyi kwesiri inara site na Jon 14:9-11 banyere ihe nzuzo omimi nke Atọ n’Ime Otu?
Gini mere mmụọ nsọ ji nye Ọkpara otuto dika Okpara n’eto Nna Ya otuto mgbe nile?
Gịnị ka Jizọs kwere na Jọn 14:23 banyere ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu?
Nghọta ndị dị a intoaa dị mkpa banyere chi atọ n'ime otu ka Jizọs kpughere na Jọn 17:21-23?
Gini mere okwu a bu “Atọ n’Ime Otu” ji bu asusu amusu n’asusu bekee mgbe ana ekwu maka Chineke nke Akwukwo nso? Gini mere okwu a bu “Chi atọ n’ime otu” ji bụrụ nke zuru oke ịkọwapụta Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ? Gịnị ka anyị ga-ekwusi ike n'okwu anyị na ndị Alakụba na ndị Juu banyere okwu a?
Gịnị kpatara anyanwụ, ụzarị anyanwụ na igwe anwansị anyanwụ na-arụtụ aka na Chi atọ n'ime otu?
Olee otu igwe na-enye ọkụ, eletriki eletrik na nsonaazụ ya na ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-anụ ọkụ, ndị na-anụ ọkụ ma ọ bụ kọmpụta na-egosipụta ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu?
Kedụ ihe anyị ga - amụta na mmiri, site na ime ụlọ na mmadụ dịka ihe ndi dị mgbagwoju anya?
Olee otu anya, akwa, ma ọ bụ triangle na-arụtụ aka ịdị n'otu nke Atọ n’Ime Otu?
Kedu ihe dị iche n'etiti 1 + 1 + 1 na 1x1x1? Kedu otu mgwakota agwa si na ntụ ọka, mmiri na yist wee ghọọ achịcha?
Gini mere ihe ndia n’echiche na ndu ubochi adighi abughi ihe akaebe banyere idi n’otu nke Ato nato di otua? Gini mere ndi Kristian ji enwe ike itughari uche na olulu okwu na gini ka onye Alakụba kwesiri ighota ihe ndi na-emegide ihe ndi ime mmụọ?
Kedụ ka Muhammad chere na a mụrụ Kraịst na Meri? Kedụ ka echiche nke a ga - esi nyere anyị aka n'okwu anyị na ndị Alakụba?
Gini mere ike nke Kraist site na mo nke sitere na Allah puru isi gosi na “idi n'otu na oru” nke Allah, mmuo ya na Kraist?
Kedụ ka kor'an si kọwaa na Kraist bụ naanị nwoke Ayatollah nke Allah họpụtara? Kedụ ka amaokwu a si nyere ụfọdụ ndị nkuzi kor'an na Africa aka ịbịaru nso n'eziokwu nke Atọ n'Ime Otu?
Kedụ ka okwu Qur’an siri kwuo na Kraist bụ “okwu si na Allah” ma ọ bụ “okwu ya” n’anụmanụ ga-enyere anyị aka n'okwu anyị na ndị Alakụba?
Gini mere nkọwa a nke kor'an banyere Kraist dị ka “mmụọ si n’aka Allah” ji kwado anyị ịkọwa ndị Alakụba na Nwa nke Meri ebighebi na Chi nke Chineke?
Kedụ ihe mkparịta ụka nke Qur'an na-ekwu n'etiti Allah na Kraịst mgbe ọ rịgoro n'eluigwe? Kedu ihe kpatara anyị ga-eji kwenyere ndị Alakụba na Atọ n'Ime Otu, nke Muhammad jụrụ, ga-ajụkwa anyị? Kedu otu nkwekọrịta a ga-esi mepụta ọnọdụ dị mma iji gosi ndị Alakụba Atọ n'Ime Otu "nke mmụọ"?
Kedụ ihe bụ isi achọrọ iji kọwaara onye Alakụba ịdị n'otu nke mmụọ nke Atọ n'Ime Otu?
Kedu ọgbụgba nke ndịozi Kraist dịka nghọta gị siri gosipụta ịdị n'otu nke Holy Trinity n'ụzọ kacha mma?
Nwere ike igosi anyị ebe okwu a bụ “Atọ n’Ime Otu” na Akwụkwọ Nsọ?
A na-ahapụ onye ọ bụla sonyere n'ajụjụ a ka o jiri akwụkwọ ọ bụla mee ihe ya ma jụọ onye ọ bụla kwesịrị ntụkwasị obi mara ya mgbe ọ na-aza ajụjụ ndị a. Anyị na-eche azịza ederede gị gụnyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na ozi ịntanetị gị. Anyi n’ekpeere gi ekpere n’ebe Jisos siri di ndu, ka O gha ezite, duzie, ike, chebe ma nonyere gi ubochi ndu gi!
Abd al-Masih na umu-nne ya n’ime Onye-nwe
Ziga azịza gị na:
ma ọ bụ site na e-mail na:
Kraịst kwuru sị:
Mmụọ nke JEHOVA dịkwasịrị m
n'ihi na O teworom manu
ikwusa ozi oma nye ndi ogbenye.
O zitewo m ịgwọ ndị obi ha tiwara etiwa,
ikwusa nnwere onwe nye ndị a dọtara n’agha
Ọ gnye kwa ihe-ọhuhu ofa ndi ìsì,
Izipu na ndi an aremeb , u ka ha nwere onwe-ha,
ikwusa afọ anabataghị nke Jehova.
Page last modified on March 23, 2020, at 11:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)